Kooxda Istaraatiijiyada Lincoln - Kooxda Istaraatiijiyada Lincoln
Hoggaamiyaha Caalamiga ah ee Dhaqan aan-ahaynCreativeSanduuqa DibaddaAlternativecusub Solutions
Tan iyo markii ay
Kooxda istiraatiijiyadeed ee Lincoln waa shirkad wadatashi wadamo badan oo la aasaasey 2003 waxayna u soo baxday hogaamiyaha adduunka ee xalka hal-abuurka leh.
Macaamiisheena ayaa ku kala duwan noocyo kala duwan oo warshado ah oo ka kala socda ururro aan macaash doon ahayn ilaa shirkado Fortune 500; hase yeeshe, badanaa waxay leeyihiin hal shay oo ay wadaagaan: baahida loo qabo xalka hal abuurka markii xeeladaha dhaqameedku aysan ku filnayn.
17-kii sano ee la soo dhaafey, waxaa naloo aaminay in aan horumarino oo aan maareyno mashaariicda guuleysta abaalmarinta ee dhammaan 50-ka dowladood, 14 dal & 4 qaaradood.
Iyo, in kasta oo kooxdeenu ay ku kala duwan tahay aqoontooda gaarka ah ee ka socota arrimaha dadweynaha si looga tashado arrimaha siyaasadeed, xuduntayada, kulligeen waxaan daneeynaa hal shay: guuleysiga.
Si taas loo gaaro, waxaan fahamsanahay sida ay muhiimka u tahay taasi dhammaan xalalka si aad ah ayaa loo habeeyay waxaana taageeray xeeladaha ugu horumarsan.
Ku dheji taas oo leh falanqeynteenna degdegga ah, kormeerka ololaha & xakamaynta tayada, waxay noo oggolaaneysaa inaan marwalba hubinno in macaamiisheennu ay yihiin adoo ilaalinaya faa'iidada & ixtimaalka ugu sareeya ee guusha.
Iyo, sababta oo ah kooxdayada caalamiga ah waxay ka shaqeysaa aagag waqtiyo badan leh, waxaas oo dhan waxaa hoosta laga xariiray awooddeena u adeegso macaamiisheena saacad kasta.
Waxbadan oo ku saabsan Lincoln
AllUnited StatesSpainBoqortooyada IngiriiskaItaly
Arimaha Bulshada & Xiriirka Dowlada
Istaraatiijiyadda Ololaha & Maareynta
Maareynta Dijital ah & Istaraatiijiyadda
Cawska, Cilmi-baarista, Xiriiriyaha Cod-bixiyaha & Inbadan
Warshadaha & Qaybaha Waanu Adeegnay
Macaamiisha Istaagtay inay Noogu Talajiraan
Abaalmarino & Aqoonsi Shaqadeenu Kasbatay